नेपाली समाज युएईको खारेजीबारे उठेका प्रश्नहरू – Everest Dainik – News from Nepal
नेपाली समाज युएईको खारेजीबारे उठेका प्रश्नहरू
युएई । नेपाली समाज युएईको अधिबेशन सँगसँगै नयाँ नेत्रित्वमा कस्ता ब्यक्तिहरु आउनु पर्छ भन्ने बहस हुन थालेको छ । बहसको आवश्यकता हिजो पनि थियो तर आज त्यो आवश्यकता अझै टड्कारो देखिएको छ ।
नेपाली समाज युएईको अधिबेशन यही शुक्रबार जुलाई ७ तारिकका दिन दुबईमा हुन गईरहेको छ । नेपाली समाजको अध्यक्ष पदमा चन्द्र प्रसाद सापकोटा र धादिङ समाज युएईका अध्यक्ष भीम अधिकारीले उम्मेद्बारी दर्ता गरेका छन । त्यसैगरी महासचिवमा तोयानाथ लम्साल (नारायण) र उपाध्यक्षमा कमला भण्डारी, प्रबिणकाजी श्रेष्ठ र मोहम्मद नोमान सिद्दिकीले उम्मेद्बारी दर्ता गरेका छन । यद्दपी कमाल भण्डारीले उम्मेद्बारी फिर्ता लिईसकेकी छिन । कृष्ण पौडेलले सचिबमा र गोबिन्द प्रसाद भट्टराईले कोषाध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन । गणेश न्यौपाने, हरी प्रसाद चापागाइँ र बिक्रम पौडेलले सदस्यमा उम्मेद्बारी दर्ता गरेका छन । युएईमा रहेका जानबुझेका नेपालीलाई नेत्रित्व दिन सक्ने अनुहारहरु यिनै हुन । युएईमा पनि थिए होलान नि “अक्स्फोर्ड विश्वबिद्यालय” पढेकाहरु ? राम्रा ब्यक्तीहरु, डाक्टर, ईन्जिनियर, नर्स, शिक्षक, ब्यवसायी, असल सर्बसाधारण नभएकै हुन त ? प्रश्न उठेको छ । उम्मेद्बारी पनि कम पर्नु, परेका पनि चित्र बिचित्रका पर्नुले अब यसको औचित्य माथि प्रश्न उठाउनु पर्ने बेला भएको छ ।
यहाँ निर्वाचन समितीको बारेमा पनि कुरा उठ्न थालेका छन । कुनै राजनैतीक पद नलिएका ब्यक्तिहरु संस्थाको पदाधिकारीमा आउनु पर्ने नियमलाई उल्लङ्घन गरिएको आरोप लाग्न थालेका छन । अहिले देखिएका अनुहारहरु कोही कोही त कुनै कुनै राजनतितिक दलका केन्द्रिय सदस्य सम्म भएका छन । उनिहरु बिरुद्दका दाबी बिरोध खारेज भएका छन । यसले गर्दा अधिबेशनमा बिबाद निम्तने सक्ने खतरा पनि रहेको छ । तथापी निर्वाचन समितीको काम कारबाहीको बारेमा बहस गर्नु भन्दा पनि आजको बहस सिंगो संस्थाकै औचित्य माथि हो ।
बजारमा नेत्रित्वको बारेमा बेलाबखत बिभिन्न नकारात्मक कुराहरु आउने पनि गरेका छन । त्यस्ता नकारात्मक कुराहरुले समाजसेवा गर्न मन भएकाहरुमा नैराश्यता पैदा गर्ने छ । तर नकारात्मक कुराहरु, नेत्रित्व र संस्थाको बद्नाम गर्नेहरु सर्बसाधारण नेपाली नभएर कुनै न कुनै बेला तिनै समाजका नेत्रित्व गर्नेहरु नै हुन । युएईमा अर्काको पैसा खाएर भाग्ने, लुट्ने, हुण्डी र सुनको ब्यवसाय गर्ने, भिजिट भिसाको ब्यापार गर्नेहरु कुनै न कुनै संगठनमा आबद्द छन । र ती संस्थाको आडमा नेपालीहरुलाई ठगी गर्ने गरेका छन । जस्तो गतसाल हुण्डीको पैसा ठगी गरी युएईबाट भागेका लक्ष्मण भण्डारी हुन वा केही समय पहिले अलऐन बाट फरार ब्यक्ती हुन तिनिहरु कुनैन कुनै संस्थामा आबद्द थिए । यसैको कारणले युएईको समग्र नेपाली समुदायमा नेपाली समाजसेवीहरुको छबी त्यती राम्रो भएको पाईन्न ।
नेपाली समाज युएईमा अहिले मनोनयन गरिएका ब्यक्तिहरु मध्ये केहीको छबी पनि त्यो भन्दा कम छैन । अर्थात राम्रो छैन । कोही रक्सी खाएर प्रधानमन्त्रीलाई तथानाम गाली गर्ने, सर्बसाधारणको जागिर खाइदिने भन्दै धम्क्याउने देखी कोही कुनै बेला मानब तस्करमा नाम जोडीएकाहरुले मनोनयन गरेका छन र तिनै मध्येले नेपाली समाजलाई नेत्रित्व गर्ने पक्कापक्की पनि छ । जानकारहरुका अनुसार मनोनयन दर्ता गरेका मध्ये एक जना उम्मेद्वार त नेपालमा मानब तस्करको आरोपमा केही महिना जेल सजाय काटिसकेका ब्यक्ति समेत छन । श्रोतका अनुसार तिनी कुनैबेला प्रतिबन्धित मुलुक ईराकमा मानब ब्यापार गर्ने गर्थे । यदि यो सत्य हो भने यस्तो अवस्थामा नेपाली समाज युएईबाट नेपाली कामदारहरुले के आशा गर्न सक्छन ? के त्यस्ता ब्यक्तिहरुले समाजको नेत्रित्व गर्न सक्छन ?
आखिर यस्तै समाज निर्माण गर्ने हो भने यो समाजको आवश्यकता समाप्त भएको छ । नेपाली समाजलाई अब खारेज गरिनु पर्दछ । दलाल, भ्रस्ट र नैतीक आचरणले दाग लागेका ब्यक्तिहरुलाई नेता बनाउन कुनै पनि संस्था चाहिन्न । १९९० मा खोलिएको पुरानो संस्था भन्दै यस्ता ब्यक्तीहरुलाई नेत्रित्व दिईनु भन्दा खारेज गरिनु पर्दछ । पुरानो हुँदैमा त्यसैको ब्याज खाईरहनु पर्दैन । नराम्रो बिरुवा भए काटेर फाल्ने र राम्रो बिरुवामा राम्रो फल पनि फलाउन सकिन्छ ।
त्यसो भए नेपाली समाज युएईको खारेज नै यसको समाधान हो ? हैन । सबै संघसंस्था मिलेर युएईको कानुन बमोजिम नेपाली क्लब (संस्था) दर्ता गरिनु पर्दछ । युएईको सरकारले धेरै पटक अबैधानिक समाजिक संस्थाहरुलाई कानुनी दायारामा आउन जानकारी गराईसकेको छ । नेपालीहरुले के के र कस्तो कस्तो कार्यक्रम कहाँ कहाँ गर्छन् भन्ने कुरा युएईको सरकार राम्ररी जानकार छ । पटक पटकको चेतावनी पश्चात पनि नेपालीहरुले यस्ता हर्कत बन्द गरेनन भने युएई सरकारले कारबाही गर्नेछ ।
तसर्थ अब यो नेपाली समाज युएई खारेज गरौ र नयाँ संस्था दर्ता गरौ । पुरानो संस्था हो, माया लाग्छ र खारेज गर्न सकिदैन वा खारेज नगरौ जस्तो लाग्छ भने यसलाई परिमार्जन गरौ । असल ब्यक्तिहरु खोजौ, बिधान परिमार्जन गरौ र नयाँ संस्थामा रुपान्तरण गरौ । युएईको कानुन बमोजिम गरौ । दर्ता गर्न के के प्रकृया पुरा गर्नु पर्ने हो पुरा गरौ । कार्यक्रम र कृयाकलाप लुकेर नगरौ, खुलेर गरौ । चोर बाटो हैन सिधा बाटो हिडौँ ।
ट्याग्स: Nepali Samja UAE